कञ्चनपुर एमालेमा पहिरो, जिल्ला नेतासहित सयौं माओवादीमा प्रवेश - Everest Dainik - News from Nepal
कञ्चनपुर एमालेमा पहिरो, जिल्ला नेतासहित सयौं माओवादीमा प्रवेश
भीमदत्तनगर, जेठ १५ । कञ्चनपुर जिल्लामा सैयौं एमाले समर्थक नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
नेकपा एमाले कञ्चनपुर जिल्ला सचिवालय सदस्य यज्ञ प्रसाद कंडेल सहित क्षेत्र नम्बर १ का सयौं नेता तथा कार्यकर्ता एमाले र कांग्रेस परित्याग गरि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको नेतृ बीना मगरे बताईन ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी, पुनर्वास, बाइसे बिचवा, लक्ष्मिपुर, त्रिभुवनबस्तीलगायत कैयन गाउँ र नगरबाट तीन सय भन्दा बढी कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेको उनले बताईन ।
नव प्रवेशीहरुलाई माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय कार्यालय सदस्य एवं प्रदेश नं ७ का इञ्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
कँडेल दक्षिणी क्षेत्रमा निकै प्रभावशाली एमालेका नेता हुन । एमालेको समेत बलियो उपस्थिति रहेको क्षेत्र नं. १ मा माओवादीमा प्रवेशको क्रम बढेको उनले बताईन । पार्टीका तहबाट समेत उक्त क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलको बताउँदै बीनाले संगठन निर्माण राम्रो गतिमा अघि बढेको बताईन ।
याे पनि पढ्नुस खानेपानी मन्त्री बिना मगरद्वारा लिङ्गा क्षेत्रको भ्रमण
तस्वीरः ७ नं. प्रदेश प्रचार प्रसार समितिका संयोजक ओम बिक्रम भाट सरलको फेसबुकबाट
ट्याग्स: bina magar, Lekhraj Bhatt, Maoist Kanchanpur